Maxaad Ka Ogtahay Goobaha Dunida Ku Yaalla Ee Ka Caagan Booqashada? – somalilandtoday.com
Maxaad Ka Ogtahay Goobaha Dunida Ku Yaalla Ee Ka Caagan Booqashada?
Xisbiga WADDANI Oo Ka Jawaabay Warbixinta Ay Soo Saartay Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland
Hanti-dhawrka Oo Xabsiga Dhigay Mas’uuliyiin Ka Tirsan Dawladda Hoose Ee Gabilay Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Siyaasiyiin Xilal Culus Ka Soo Qabtay Dalka Oo Bilaabay U Ololeynta Wasiir Saajin Iyo Inay Ergooyinka Shirka KULMIYE U Weydiiyaan Codadka
Hoggaamiye Xirsi Oo Ka Hadlay Sidda Ay Xukuumadda KULMIYE Ugu Fashilantay Buuggii Cagaarnaa Ee Ay Doorashadii Madaxtooyada Ku Gashay
Dunidan casriga ah oo dadka ku nool haatan ay ku haminayaan in dalxiis ay ku tagaan hawada sare, dhawaanna la filayo in arrintaas la billaabo, sidoo kalena ay sahlan tahay in qofka meesha uu doona uu u dalxiisi tago karo, booqan karana goobaha taariikhiga ayaa haddana waxaa jira gooba dadka ban’iaadamka ka caagan inay booqdaan oo aan war badan laga heynin.
Waxaan halkan idin kugu soo gudbineynaa ilaa iyo toddobo goobood oo aan dadka loo oggoleyn inay booqdaan, ayna ugu wacan tahay khatar amni, arrimo xasaasi, dano guud iyo waxyaaba kale.
1.Jasiiradda masaska ee dalka Brazil
Jasiiradda Ilha Da Queimada Grande ee dalka Brazil waxaa ay ka mid tahay goobaha caanka ah ee aan dadka loo oggoleyn inay booqdaan. Waa goob halis ah oo ay adag tahay in qofkii tagaa uu ka soo noqonaya isagoo badqaba.
Jasiiraddan ayaa waxaa ku nool masaska ugu badan adduunka inta la ogyahay, waxaana lagu qiyaasay in mitir walba oo dhulka jasiiradaas uu jiifo mas, waxaana la sheegay inay yihiin masas marka uu qofka arko argagax gelin kara, waxyeeleyn karana dadka bani’aadamka.
Masaskaas ku nool jasiiradda Ilha waxaa lagu tilmaamay inay yihiin masaska adduunka kuwooda ugu khatarta badan, waxaana kamid ah maska nooca casaanka ah ee candhuufta tuura.
Dowladda Brazil ayaa xidhay jasiiradaas, kana mamnuucday in dadka ay booqdaan. Inta la ogyahay dowladda dalkaas ayaa dadka cilmi baadhista sameeya oo keliya u oggolaatay inay booqdaan jasiiraddaas, kuwaas oo iyaguna la dul dhigay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay la socdaan dhakhaatiir daweyn kara haddii ay wax noqdaan.
Khubara arrimaha deegaanka oo ka socday jamaacadaha Sydney, Australia, iyo Selma Maria oo BBC-da, qeybta Brazil la hadlay waxay sheegeen in jasiiraddan ay sameysantay 11 kun oo sano ka hor, taasina ay keentay in duur-joog u badan masas ay ku tarmaan jasiiradda hawdka ah ee dhanka xeebta kaga beegan magaalada Sao Paulo.
Keydka qarsoon ee kaniisadda Vatican-ka
Keydka qarsoon ee kaniisadda Vatican ee ee dalka Talyaaniga waa mid aan loo oggoleyn in dadku ay booqdaan.
Keydkan oo sida la sheegay ku dhexyaalo dhismo weyn ayaa la aaminsan yahay in halkaas ay ku keydsan yihiin dukumentiyo muhiim ah oo taariikhi ah.
Waxyaabaha la sheegay in halkaas ay ku keydsan yihiin waxaa ka mid ah waraaqo ay isweydaarsan jireen Vatican-ka iyo dadkii caanka ahaa ee soo maray dunida, kuwaas oo ay ka mid yihiin mualifkii caanka ahaa ee Wolfgang Amadeus Mozart, boqoradii koowaad ee Ingiriika, Adolf Hitler iyo dad kale oo taariikh dheer ku leh dunida.
Xogtaas oo ah mid u khaas ah baadariga mad-habta kaatooliga ayaa ah mid ka caagan dadka adduunka oo ayna arki karin marka ay soo booqanayaan goobtaas.
Cilmi-baadhayaasha arrimaha seyniska ayaa la sheegay inay yihiin dadka keliya ee dalban kara oggolaansho ay ku galaan goobtaas, haddiise loo oggolaado waxaa ay ku dhaqmayaan shuruuc adag oo ay ka mid tahay in aanay wax waraaqa ah kala soo bixin karin keydka qarsoon. Waxaa kale oo jiraa shuruuc dhigeysa in iyaga xitaa aanan loo oggoleyn inay arkaan waxyaabaha qaar.
Keydka qarsoon ee Vatican-ka ayaa sidoo kale ah meel lagu keydiiyay xog badan oo la xidhiidha Catholic-ga, waxaana la sheegay inay ku keydsan tahay taariikh gaadheysa ilaa iyo qarnigii 8-aad.
Inta badan macluumaadkan ayaa ku keydsan bakhaaro dhulka hoostiisa ah, waxaana ay ku fadhiyaan dhul gaadhaya 85 kilomitir.
3.Xarunta lagu keydiyo midhaha dalagyada ku beeran Adduunka
Waa sanduuq aad u weyn oo u sameysan sida qaboojiyaha, laguna keydiyo midhaha dalagyada adduunka laga beerto. Sanduuqan oo ku yaalla gudaha dalka Norway ayaa waxaa hirgelisay dowladda dalkaas, waana goob lagu ilaaliyo midhaha, si haddii ay masiibo ama aafo kale ka dhacdo dunida loo helo keyd midho oo loo laaban karo.
Wargeyska the Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa ku soo warramay in sanduuqan oo ku yaalla jasiiradda Spitsbergen ay ku keydsan yihiin milyan baaldi oo midkiiba ay ku jiraan boqol milyan oo ah midho kala duwan ah, kuwaas oo aad muhiim ugu ah dunida, waxaana mashruucan la hirgeliyay sanadkii 2008.
Waxaa laga dhisay qalab ay adag tahay inay biyo ama waxyaaba kale ay dibadda uga yimaaddaan, kadibna ay waxyeeleeyaan. Xarunta looma oggolo dadku inay booqdaan, waxaana sababta lagu sheegay sidii looga baaqsan lahaa waxyeelo soo gaadhi karta midhahaas.
Sanduuqan waxaa ku dhan dhammaan midhaha dalagyada laga beerto caalamka, haddii ay ahaan lahayd qudaar, cuntada iyo dhamaan waxyabaaha laga isticmaalo adduunka.
Sanduuqana ayaa loo nashqadeeyay qaab aanu u dumin, adkeysigiisnaa uu gaadhayo laba boqol oo sano, waxaan uu iska celin karaa waxwalba oo ay ka mid yihiin duufaanta, qaraxyada dhul gariirka iyo wixii la midka ah.
Midhaha halkan lagu beeray ayaa ah mid laga soo uruuriyay dhammaan dalalka caalamka, waxaana dalalka halkaas wax ku keydsaday kamid ah Kuuriyada Waqooyi oo aan inta badan wax xidhiidh ah la lahayn caalamka intiisa kale marka laga reebo dalal dhowr ah oo Shiinaha uu ka mid yahay.
4.Jasiiradda xabaasha ee dalka Talyaaniga
Poveglia waa jasiirad yar oo ku taala dalka Talyaaniga, una dhaxeysa xeebaha magaalooyinka Venice iyo Lido. Goobtan waxay horay u ahayd goob lagu karantiilo dad qaba cudurka Bubonic ee ka dhashay baktiiriyada, waxaana mar la sheegay in lagu karantiilay 160 kun oo qof oo qabay cudurkaas, kuwaas oo markii dambe qaar badan oo kamid ah ku dhintay jasiiradaas.
Wararka qaar waxay sheegayaan in boqolkiiba konton carrada dhulka jasiiradaas ay tahay haraadiga jidhka bani’aadamka, maaddaama sida la sheegay meydka dadkii u dhintay cudurkaas ay ku qudhmeen dhulka.
Wargeyska Daily Mail ee Britain kasoo baxa ayaa kusoo warramay in jasiiraddan muddo hadda laga joogo 70 sano ay ahayd goob gumeystihii Talyaaniga u ahayd xarun lagu hayo dadka qaba xanuunada dhimirka, waxayna taas keentay in dowladda Talyaaniga ay markii dambe xidho jasiiradda Poveglia, kana mamnuucdo in dadku ay booqdaan.
Qolka 39-aad ee Kuuriyada Waqooyi
Dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamo in uu yahay dal go’doon ah, kana go’an dunida inteeda kale ayaa waxaa adag in wax badan laga ogaado waxa ka dhex socda.
Dalkan oo sidiisaba ay adag tahay in wax laga ogaado madaxda dalkaas iyo waxyabaaha ay qabtaan ayaa qol lagu magacaabo “Room 39” waxaa la sheegay in uu yahay qol aanan cidna loo oggoleyn inay gudaha u soo gasho.
Wax badan laga ma oga qolkan ku yaala magaalada Pyongyang, haseyeeshee dad aqoon u leh ama lasoo shaqeeyay xukuumadda dalkaas waxay sheegeen in qolkaas uu yahay goob ay si gaar ah ugu kulmaan hoggaamiyaha waddankaas iyo saraakiisha milateriga.
Ri Jong oo ah sarkaal horay uga tirsanaa xukuumadda Pyongyang oo u warramay telefishenka CNN ee Mareykanka ayaa sheegay in waxyaabaha kale ee lagu qabto qolka 39 oo uu muddo kasoo shaqeeyay ay tahay meel lacagta loogu geeyo saraakiisha sarsare ee dalkaas. Dowladda Mareykanka ayaa horay u sheegtay in qolka 39 uu yahay mid lagu qabto hawlo sharci darro ah.
Aaga 51-aad ee dalka Mareykanka
Aaga 52 ee ciidamada cirka ee dalka Mareykanka waa goob caan ka ah dalkaas oo loo yaqaano “Area 51. Hey’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa markii ugu horeysay qirtay jiritaanka goobtan sanadkii 2013-ka.
Inta badan goobtan kama soo muuqato qariiradda goobaha dalka Mareykanka, waxaana la aaminsan yahay in sidaas loo sameeyay sababo amni.
Goobtan oo qiyaastii 170 kilomitir u jirta Las Vegas ayaa sanadkii 1958 waxay hey’adda atoomikada Mareykanka ka saartay goobaha dadweynaha ay tagi karaan.
Waxaa gidaarka goobtan ku hareereysan ciidamo hubeysan. Sidoo kale waxaa adag in diyaaradaha ay dul maraan goobtan iyagoo aanan wax fasax heysanin.
Way adag tahay in la ogaado waxa ka dhex socda xaruntaas, dadkuna marnaba looma oggolo inay gudaha u galaan oo waxaa gidaarada ku dhagan koronto dili karta qofkii isku daya in uu gudaha u galo.
Xaruntan waxaa ay u dhaw dahay saldhig milateri ee Nevada oo ah meel lagu tijaabiyay hubka nukliyeerka Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 1950 ilaa iyo 1990. Waxay ku fadhidaa dhul dhan saddex milyan oo hektar.
Waxay dad badan rumeysan yihiin in dowladda Maraykanka ay xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan Suxuunta Duusha oo la rumeysanyahay in ay kaxeeyaan nooleyaal qalaad oo cirka ka yimid.
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka aaminsan yihiin in qaar ka mid ah noolayaashaas ay dowladda Maraykanka qabatay, kuna hayso xaruntaasi Area 51 ee Navada.
Annie Jacobsen oo wax ka qoray taariikhda saldhiggan ayaa BBC-da u sheegay in goobtaas ay ku rakiban yihiin qalab aad u horumarsan oo dowladda Mareykanka ay u adeegsado hawlaha sirdoonka.
Jasiiradda dadka go’doonsan ee Hindiya
Jasiiradda Sentinel ee ku taala waqooyiga dalka Hindiya waa hoyga dadka asal ahaan loogu yimid dalkaas, kuwaas oo qarniya ku noolaa halkaas.
Dadkan ma ahan dad doonaya inay la macaamilaan dadka kale ee adduunka, marwalbana waxaa la sheegay inay dagaal kala hortagaan qof walba oo isku daya in uu soo gala jasiiradaas.
Dowladda Hindiya ayaa joojisay dhammaan isku day walba oo loogu tegi karo dadkaas, kadib markii ay ogaatay khatar dadka kasoo gaadhi karta, waxaana dowladda ay hagaajisay xeyndaab aanan loo dhaafi karin dadkaas.
Sanadkii 2006, kalluumeysato isku dayay in uu gudaha u galo jasiiradaas ayaa la dilay. Sidoo kale dalxiise u dhashay Mareykanka oo isku dayay in uu tego jasiiradaas ayay dileen dadkii ku noolaa goobtaas.
Dad badan oo isku dayay inay booqdaan goobtaas ayaa waxaa ay iska hor-imaad kala kulmeen dadka Sentinel, lamana oga sida ay u nool yihiin iyo dabeecadooda.
By Wariye September 24, 2020
(SLT-Hargeysa)-Wararkii ugu dambeeyey natiijada baadhitaannadii ku socday qaar ka mid ah xafiisyada hay’adaha dawladda ee ay...
(SLT-Hargeysa)-Iyadoo uu keebiga soo saaran yahay wakhtigii loo qoondeeyey inuu Magaalada Hargeysa uu ka furmo shir...
(SLT-Hargeysa)-Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa xukuumadda iyo xisbigeeda KULMIYE...
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Dhaariyey Xildhibaan Buuxiyey Kursi Ka Banaan Golaha Wakiillada
(SLT-Hargeysa)-Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland garyaqaan Aadan X. Cali Axmed ayaa shalay...
By WariyeSeptember 24, 2020